Saraakiisha hogaamineysa Al shabaab ee Puntland garey oo lasheega in la ogaaday Magacyadooda iyo Deegaanadda ay asal ahaan kasoo jeedaan
Iyadoo dagaalamayaal ka tirsan Al shabaab ay socdaal ku marayaan deegaano ka tirsan maamulka Puntland ayaa waxaa wararku ay sheegayaan in la heyb aqoonsaday saraakiisha hogaaminaya Al shabaabka duulaanka ku ah Puntland.
Warbaahinta Puntland ayaa baahisay in shabaabka deegaanadooda gaaray ay hogaaminayaan shan sargaal oo kasoo jeeda deegaanadaasi.
Shanta sargaal ayaa magacyadooda waxaa ay kala yihii:
Saciid Karateey oo ka soo jeeda Magaalada Garoowe ee Gobolka Nugaal
Xasan Takar oo ka soo jeeda Degmada Goldogob ee Gobolka Mudug.
Jaamac C/asalaan oo kasoo jeeda Gobolka Mudug .
Ilqeyte oo kasoo jeeda Gobolka Mudug.
Cadoow Gowtax oo kasoo jeeda Gobolka Mudug
Ciidamadda maamulka Puntland ayaa bilaabay dhaqdhaqaaqyo ay kaga hortagaan Shabaab duulaanka ku ah deegaanadooda.